Ebee ka m nwere ike ịhụ ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Azịza Kacha Mma
Isi > Gba Ígwè > Bikezọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe dị m nso - azịza na-adịgide adịgide
Ebee ka m nwere ike ịhụ ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe?
Nke ahụ kwuru, ụzọ ochie bụ oge kachasị mma
Soro ndi otu ndi na-agba inyinya Yep, nke kacha mmaụzọ ịchọta ụzọ ụkwụka kachọtandị mmadụ iji gosi ha gị.
Jiri ngwa nwere maapụ.
Chọọ na Strava.
Youtube bụ enyi gị.
Gaa ịgba ọsọ ma cheta ihe ị gbara.
Soro imi gị.
Tupu ọnọdụ a dị ugbu a, m ga-awabanye n'ụgbọala ma na-aga ebe a na-agagharị n'okporo ụzọ mgbago ugwu, wdg. Betrails nke m na-agatụbeghị ma chọpụta na igwe kwụ m bụ ihe kachasị mkpa maka ịgagharị. Taa, m ga - egosi gị otu esi kee obodo gị nke ị ga - eme mkpa ị ga - eburu gị gaa ebe ị ga - ebido aka gị, mana cheta na ọ bụrụ n’ịkwọ ụgbọ ala n’ogige ahụ, ị ​​nwere igwe kwụ otu ebe gị. ụgbọ ala, yabụ kpọmkwem na nkeji iri na ise nke mile ahụ akaghị gị, ọ gaghị aba uru, ọ bara uru n'ezie n'ihi na ọ gaghị ewute ndị obodo ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ihe dị nso na ụlọ gị, mgbe ahụ, ọhịa gị dị oke mma ebe ibido ugbu a You're bidola iwu ebe ahụ tupu ịgagharị, mana iji chọpụta ya, ị ga-eme ngwa na ebe ndị ahụ na-arụ ọrụ n'okwu ndị a na -ekọrịta ụzọ nke arụrịrịrị, mana a ga-enwe ọtụtụ egwu na-anọghị n'ịntanetị ka nweta ya ka ị pụọ ma chọpụta ya ọtụtụ ihe bara nnukwu uru n'ime ọhịa mpaghara gị.
Maapụ ahụ bụ ụzọ dị mma iji chọpụta ụzọ ụkwụ ọhụụ ọhụrụ dị gburugburu anyị nwere ike ịgụnye mpaghara a n'ụzọ zuru ezu, ọkachasị na maapụ nyocha kwesịrị ekwesị. Echere m na ị nwere ike ileba anya na mpaghara ahụ wee chọpụta ihe ọ bụla enyere gị, na ọ na-egosikwa gị ebe ụzọ ụkwụ dị ka ị chọghị ịgbago n'elu ihe ukwu na mpempe akwụkwọ na ọ bụ ọdịda- ụzọ dị mma iji chọpụta ụzọ ụkwụ ga-adị mgbe ọ bụla n'agbanyeghị ihu igwe, ma ị nwere ụlọ batrị ma ọ bụ ma eleghị anya ngwa ahụ na ekwentị gị na-adaba na nhọrọ nhọrọ a na-enweghị isi, mana ụfọdụ n'ime ụzọ ndị a dị ịtụnanya agaghị egosi na maapụ . Otu n'ime ụzọ kachasị amasị m iji hụ ihe ọla edo ndị ahụ mgbe ị nọ n'ugwu gaa ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe ma gwa onye nwe ya okwu nke na-agwa ndị na-ada ma ọ bụrụ na ha na-amasị ịnya igwe ugwu, ị nwere ike ịkparịta ụka na ha na ha niile achọpụta ụzọ ndị a ma ọ bụ ikekwe na-aga otu ịnyịnya, otu ndị a na-eme n'akụkụ ụwa niile, yabụ zukọ n'ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gbasara obere igwe nwere ike ịnụ tii ma chọpụta ụzọ niile dị n'ógbè gị wee nwee biya ma malite ịkparịta ụka ọ bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ịkparịta ụka na mgbasa ozi mmekọrịta dị mma nwere anya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, soro ibe facebook nke otu mpaghara niile na-anya gburugburu gị n'ụzọ a, ị ga-egosipụta ikike ndị a ma chọpụta ụzọ ụkwụ. , ma ọ bụrụ na ịnọghị nyocha akụkụ nke ihe ma chọọ ịkwọ ụgbọala na efere, mgbe ahụ, enwere ike ịnweta ụzọ nzọ maka gị.
Marked akara akara ndị a ka ha wee dị n'elu, ha ga-ejupụta, ị maara juputara na njirimara n'ụzọ ị ga-agbadata, ị nwere ike ịnwe ọrịrị dị mfe n'elu, ọ bụ ụzọ dị mma ị ga-esi gafee naanị ụzọ ụkwụ na-adịghị ọcha. ị maara maka onye ọ bụla, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ikuku n'okpuru wiil gị ma eleghị anya gaa na ogige ntụrụndụ mpaghara gị, ha bụ ụzọ dị mma isi pụọ n'èzí ma nwee ọingụ na mpaghara gị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwọ ụgbọala n'ọnụ ụzọ gị, ụzọ kachasị mfe iji mee ya bụ site na ngwa ma ọ bụ ngwa ntanetị dị ka Stryvertrail Forks ma ọ bụ ndị njem, ebe ndị mmadụ na-ebugharịrị ma banye na ngwa a, mana ọ na-amasị m ịga n'ihu ma gaa google satellite view wee lee anya na mpaghara achọrọ m chọrọ ịkwọ ụgbọala m hụrụ atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị nnukwu mpaghara oke ọhịa na ihe naanị gị maara na ọ na-atọ ụtọ ịpụ apụ mgbe ahụ agara m ha ma mee obere okwute na mbụ wee mara na nnweta ga-abụ nke iwu na nnweta dị mma na impo achọghị m ịlele ntụpọ ndị a tupu ịtinye ha na aka gị ka ị nwere ike tụgharịa n'ụfọdụ ntụpọ na ọbụnadị banye n'ime ha wee nwee otu Njikọ na akaghị iji mekọrịta ọnụ n'enweghị nsogbu. Ugbu a, ejirila m ngwa ngwa ejiri m mee nke a nke m kpebiri n'ụzọ doro anya na mpaghara ọ bụla m chọrọ ịkwọ ụgbọala wee kwaga ga-agbakọ ụzọ dị n'agbata ebe ahụ na nke na-esote, gbakọọ ụzọ kachasị dịrị nchebe ma kachasị mfe, ọkacha mma n'okporo ụzọ na-azọpụta oge m 'Emefuola m na tarmac na ihe niile m mere bụ ịhapụ njem na nke ahụ ga-ebudata na ụzọ m na myGarmin wee gaa Ọ ga-egbutu isi n'ụzọ niile Ọ ga-eduzi ụzọ m site na akaghị aka a, ekwesighi ịsị nke ahụ na nnukwu njem dị ka nke m zubere taa, m ga-eweta akpa azụ nke nwere ihe niile dị mkpa, ọ nwekwara maapụ n'ime ya, dịka nhọrọ nhọrọ ọdịda a, mana m nwere Garmin nọ na aka m, nke ahụ mgbe niile na-enye m isi na mgbasa ozi n'okporo ụzọ nke ga-enwekwa ngwa mepere ekwentị m ka ọ nye m ebe ọzọ iji gaa otu n'ime ọdịda ndị ahụ na-achọkwa ịmara oke ị ga - enweta ugbu a na njem gị.
ịda mbà n'obi abụba
Amaara m na njem a bụ ihe dị ka kilomita 25 nke na-agaghị abụ nnukwu njem m ma abịala m ọtụtụ ihe karịa nke nwere elu karịa naanị otu igwe kwụ otu ebe na otu ntọala na batrị ahụ ka oke ya agaghị abụ nsogbu taa wee nweta ihe ngosi a n'okporo ụzọ ma gbagoo ụzọ a, ugbu a akaghị aka nwere ihe niile site na freeride ka ọkụ n'okporo ụzọ ọ bụla na-aga n'okporo ụzọ yana nnukwu ihe banyere ịhazi ụzọ m na-aga n'okporo ụzọ bụ na ọ na-eme ka m kwụpụ n'okporo ụzọ ahụ. dị ka o kwere mee n'ihi na akpọrọ m tarmac asị n'onwe m maka ozi ịntanetị m na igwe kwụ otu ebe na ụdị ụzọ a ga-esi rụọ ọrụ, ebe ga-esi n'ụzọ NationalTrust mba, ụzọ azụ, ụzọ n'okporo ụzọ na ụzọ ọhịa gafere na ụdị na ụzọ ị ga-esi bịaruo ụzọ ndị a ga- ihe niile dị iche, yabụ m ga-enye gị ntụaka ole na ole. Ọkwọ ụgbọala ọtụtụ ndị na-echegbu onwe ha banyere ndụ batrị ugbu a, m na-anwa obi ụtọ ma nọrọ na ọnọdụ ike dị ala karịa ka m nwere ike. M na-achọkarị ịmalite igwe kwụ otu ebe mgbe m hapụrụ ụlọ, kwuo maka narị mita mbụ mbụ. wee gbanye eco n'ihi na mgbe ahụ ị ga-amata ọtụtụ Eco na-enyere gị aka ebe ahụ.
Ọ dị mfe ịmalite ịgba ịnyịnya ndị a n'ọkwa ike dị elu, mgbe batrị na-apụ wee chere na chi m ihe m ga-eme, aga m aga, m ga-agba ọsọ ugbu a, ahụghị m nkwụsị mbụ na akaghị m n'ezie m gara ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe na ụmụ okorobịa nọ ebe ahụ na-ekwu maka ebe a wee chọọ ya n'ịntanetị, ngwa ngwa lelee map google ma ọ dị oke ịtụnanya maka obere ọrụ obe nke nwere ụzọ dị mma nke na-agba ọsọ. osimiri n'akụkụ akụkụ dị egwu nke ụzọ ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ihe, mgbe ị chere banyere nke a dị nso na obodo, ọ pụtara na ị nwere ọtụtụ ndị ọzọ na-ekpori ndụ? ohia na ngwụsị izu wee cheta ma ọ bụrụ na ịnọ ebe a ị maara ma ọ bụrụ na ị ga - akụ ya na aka gị, ma ọ bụrụ na ị mee ya ihe mbụ n'ụtụtụ ma ọ bụ n'abalị ikpeazụ n'ụzọ a, ị ga - ahụ ọtụtụ ndị pere mpe ọbụlagodi mgbe ị na - eme njem nke ọhịa, ma mgbe ị zutere mmadụ naanị nye ha ebe sara mbara, kwuo ka ọ na-agara gị nke ọma ma nwayọ nwayọ ebe m na-achọ ebe anyị ga-agbagharị ebe ahụ, ahụrụ m oke ọhịa a na ọdọ mmiri ndị dị ịtụnanya, na-enwu gbaa ụzọ ụkwụ na ya yiri nnọọ kediegwu maka ugwu biking? Ugbu a mgbe emechara nnyocha, achọpụtara m n'ezie na mpaghara ahụ bụ nke National Trust. Ugbu a UK National Trust na-ahụ maka ijikwa ebe dịka ebe a mara mma na mpaghara ebe a. Ugbu a ntụkwasị obi nke mbụ enyegoro ịgba ịnyịnya ugwu ugwu n'ụfọdụ ọhịa ha, mana ị ga - eme? na-aga n'ụzọ ziri ezi ma gbagoo n'ụzọ ziri ezi ha na-enwekarị ndị na-elekọta ala na-elekọta gị ka ị ghara ịchụpụ egwu ndị ahụ n'ihi na ị maara na inyeghị ịnyịnya ugwu ugwu aha ọjọọ, mana nnukwu ihe gbasara ya ịnya ebe dị ka nke a na aka gị bụ na ọ dị nro, nyekwa m njem nlegharị anya ọ nwere ike ịbụ na ị nwere ike ịkwanye igwe kwụ otu ebe maka ụgwọ maka ndị ahụ buru ibu ka ịnya ịnyịnya n'okporo ụzọ nwere ike bụrụ ihe na-agwụ ike agaghị m aga ịgha ụgha mana ị ka nwere ike ikpori ndụ, mee nke kachasị ya, tọn obere ntakịrị ntakịrị ihe ị na-eme obere ihe ị na-eme. Whepopies Off Practices Track is at the traffic light it all makes all the street efs a lot easy the route I do driving straight, is now a byway, ugbu a byway bụ nnukwu ụzọ iji jikọọ ntụpọ ndị a na akaghị gị.
Ha dịkwa mma na d ọ dị ogologo oge iji zere okporo ụzọ ma zere okporo ụzọ a na-atụ ụjọ na ụzọ ndị kachasị egwu ugbu a ị ga-enwe ụdị ndị ọrụ ị ga-ezute n'okporo ụzọ azụ ị ga-enwetakwa ATVs Land Rover motocross igwe kwụ otu ebe ị nwere ike ịnweta ugwu b ikers ọ dị ezigbo mkpa mgbe ị na-apụ n'okporo ụzọ ndị a na-emeghe anya gị na ntị gị na ntị bụ ihe dị ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị gee ntị ị nwere ike ịnụ motocross spikes ndị ahụ site n'ebe dị anya, ọ dị nro, Site na oke ọsọ ọsọ ugbu a na mmezi nke na-aga n'ihu na ya ga-adị iche ruo mgbe ụfọdụ nke Byways nwere n'ụzọ nkịtị ruts nke dị n'ụzọ miri emi dị ka njikwa gị ebe ụgbọ ala na-apụ apụ, mana ụfọdụ n'ime ha dị mma karịa Schotter ma ọ bụ ma eleghị anya, Eventarmac dị ka ice ude 'kwuru banyere anyị oké anyị. Nọgide n'okporo ụzọ ma dịka mgbe niile, mgbe ị hụrụ ndị ọrụ ọ bụla na-ekpori ndụ n'okporo ụzọ, nye ha ohere ma hapụ ha ka ha soro ihe masịrị ha, ọ bụghị naanị gị nọ n'okporo ụzọ azụ gị. Nke a bụ kpochapụwo na m sụrụ ngọngọ na Mmasị ndị a dị ịtụnanya na mpaghara nke Bitland Woodland, ugbu a, oge etinyere ego na ihe ndị a bụ ihe ịchọrọ ịkwanyere ùgwù.
Nwere ike ọ bụghị naanị ịchọta ebe dị ka nke ahụ ma na-atụ anya na ị ga-abịa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị rụghị ọrụ ahụ, ọtụtụ ụmụ okorobịa a ejirila ụbọchị na ọnwa rụọ wiilbaị, kpọọ ya, iji mepụta ụzọ ndị a dị ịtụnanya, yabụ ha na-asọpụrụkwa ya ma ọ bụrụ na ị kpadoghị ha na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ gosi ha ndị enyi gị ma ọ bụ gwa onye ọ bụla ebe ọhụụ ndị a dị ịtụnanya, ọ dịghị mma maka ngosipụta onye nrụpụta! Ọ bụrụ n 'ịchọrọ inwe oche ọkwọ ụgbọ ala dị ka nke a, ọ bara uru ịlaghachi na ngwụsị izu ma na-enwekarị ndị ọrụ ọkwọ ụgbọ ala ebe a ka ha gwuo ma nwee enyi ma mgbe ahụ ị ga-enweta ụzọ ị ga-esi na-akwọ ụgbọala ebe a, ọ bụrụ na ị M ga - eme ya, mebie ya, tinye ya na mgbasa ozi ọhaneze, ọ gaghị eme onye ọ bụla ihe ọma banyere ebe a anyị na - anya ugbu a, achọtaghị ya na ngwa ma ọ bụ maapụ, ọ bụ n'ezie na google satellite view m lere anya n'ime ya wee chee na ebe a yiri ezigbo epic, nnukwu ala, nnukwu ọdịda na ụfọdụ igwe nzuzu n'elu nke ahụ, echekwara m na nke a nwetara m ebe m ga-anwale ya, mana ị nwere iche echiche banyere ebe na mgbe ikwughachi udiri udiri a oru ma oburu na ichota ihe i chere na o kwere omume, i nwere ike ghara imebi, mgbe ahu ugbu a adighi. Oge eruola ime ya, ịghaghachite ezigbo igwe kwụ otu ebe ma gia ma kwadebe ugbu a ma ọ bụrụ na ị kwuo Breaka Wheel, ị gaghị alaghachi 20 kilomita n'ụlọ gị naanị ka ị laghachi azụ pushi ng n'ụgbọ ala gị na ịkwọ ụgbọala n'ụlọ ihe ndị yiri ụlọ gị kwa echefula iweta onwe gị n'ime igbe dị n'okpuru ebe a banyere anyị chere banyere isiokwu a na ntụpọ ndị m nyara, mee ka anyị mata nke kachasị amasị gị nke m chụpụrụ taa n'ihi isi ike ma ọ bụrụ na ị masịrị ya echefula ịdenye aha na toen bien ma hụ na ị hụrụ anyị na mgbasa ozi mmekọrịta ma denye aha anyị
Ebee ka m ga-agba ịnyịnya igwe n’elu ugwu m na Los Angeles?
Ken Burton Loop,Ndị mmụọ oziỌhịa mba.
Portuguese Bend Reserve Loop, Rancho Palos Verdes.
Ulo Oche nke Topanga Creek, Topanga State Park.
Okporo ụzọ ụkwụ, Santa Monica Mountains National Recreation Area.
Ulo Cheeseboro, Santa Monica Mpaghara Ntụrụndụ.
New Millennium Trail, Malibu Creek State Park.
Full trotul, enyi. ima elu na igbe, wuo a n'okporo ámá ntụ mmanya ka boom ewepụghị na ewepụghị, fọrọ nke nta ka ala na-elele mgbe e mesịrị bụ ebe ahụ ka ịgbanwee gaa na pov mode na-eme a shred ahụkarị la n'okporo ámá nkwụ, dope anyị ụgbọala ndị nzuzu ugbu a nwere ihe ọ bụla megide igba na wiil. ịnọ ebe ahụ nwere ike ịcksụ ara ị ga-eso anụ ọhịa ahụ pụọ niile taa, lezie anya, ekwela ka m maba n'ahịrị gị, ọ fọrọ nke nta ka ọ daa na haha ​​gaara agbaji ma ụmụ nwoke gafere, ka anyi mee yuro nke oma karie uzo ndi a ma nwee obi uto. egwu nke itughari ebe a hahaha zuru oke maka ogba ugbo ala di egwu na-adighi ozo banyere nzuzu kaadiboodu nke juputara na oso. wụpụ na igbe m ga - egosi na ị chọtara obere ntakịrị ka anyị mee mmanya si na Osisi Osisi Itoh ka ị mee fakie'lukas ihe anyị ekwesịghị ime na US. zọpụ ụkwụ na ihe onye ọzọ, gafere onye nwere egbe na steepụ haha ​​na akwa mgbago na steepụ nwere ike iru patch n'okporo ámá, plywood, ụfọdụ osisi ndị dị n'okpuru, ọ dị mma ịpụ na akụ, ntakịrị iwe, mana ọ dị mma Gafee n'okporo ámá nke si ebe ahụ bịa ka anyị nweta ụtarị dick Thanh kacha mma Dudemarc dịkwa ebe ahụ BICEPS MERE IT LA, ezigbo ike Walk of Fame Anyị kwesịrị ịchọta Snoop Doggs Otu M gosiri gị Chipotle na San Franin LA acai ọkwá bụ otu Ihe. na ha bụ ndị dị otú ahụ ezigbo nri na oyi kpọnwụrụ mkpụrụ dị ọcha, ụdị dị ka ice ude! Kọfị ka anyị gbaa ịnyịnya a dị mkpa, obere steepụ si ebe a, ọ na-arụ ọrụ? Ìhè ahu dị nzuzu, obere oge, oh, ha kwụsịrị, ka anyị nweta mmiri ka anyị bugharịa ndị ọgaranya n'otu akụkụ, ndị ogbenye n'akụkụ nke ọzọ. otú crazy, e nwere ndị na ọtụtụ crazy ebe anyị na-na LA ugbu a.
MA mma echiche, ụlọ ahịa na a ole na ole nke dope ụgbọ ala ma m hụrụ a dobe na-agbago ebe a na Fairfax High na draining na mmanya otú mkpa, ka ụgbọala fọrọ nke nta ka ala si ebe a, ọbụna adịghị nso, dude, haha;) Dude, na dị nso, brooo crazy cars, anyị na-ugbu a na-akwọ ụgbọala na ala tram na-ekiri na n'ezie aka. McLaren
Bikgba ọgba ugwu ọ siri ike karịa ịgba ọsọ?
Mmerụ ahụ.Bikgba igwe n’elu ugwuadighi ike n’ahu ma e jiri ya tunyere yana-agba ọsọ. Enweghị m ike ịgwa m ugboro ole m merụrụ ahụna-agba ọsọsite na ileghara usoro ihe omume m anya ma na-aga n'ebe dị anya, mgbe ụfọdụ n'ụzọ nkịtị. Won't gaghị atụgharị nkwonkwo ụkwụ na aigwe kwụ otu ebe(belụsọ na inwere nsogbu dị egwu), enweghị mkpịsị ụkwụ ma ọ bụ mkpịsị ụkwụ ịchegbu onwe gị.
Enwere esemokwu enyi na enyi n’etiti anyị na ndị enyi anyị na GMBN. Ihu ọma, anyị chọpụtara na ha bụ ndị ukwu na-agba ịnyịnya ígwè. Ya mere, anyị kwesiri inwe mmetụta ntakịrị karịa ịmara na ihe anyị na-eme siri ike karị.
Okporo ụzọ dị n'ụzọ ziri ezi, ọ dị mma? You nwere ike iche n'echiche otu ugwu biker na-emeri ihe dị ka Tour de France.- E nwere n'ezie Cadel Evans na 2011. (igwefoto clicks) - Ee, nke ahụ bụ ezigbo isi.
Ma ị nwere ike iche n'echiche ma ọ bụrụ na onye na-agba n'okporo ụzọ gosipụtara n'ọsọ egwuregwu ugwu ha ga-akụrisị ya - Peter Sagan, ọ gwụchara ọsọ ọsọ nke ugwu ugwu 35 n'afọ gara aga - O nwere ọkpọ ọkpọ ugboro atọ, Si. Bịanụ nye ya ohere - ee ọ mere, o nwere taya dị larịị ugboro atọ ka anyị chee na ọ ga-aka mma ịnwale itinye nke a n'ule - mana kedu ebe anyị ga-eme. Lee ndị Dolomites mara mma na mpaghara Alta Badia.
Anyị emeela atụmatụ njem abụọ, a na-ebugo ha abụọ na Wahoo ELEMNT. Anyị na-amalite ebe a na nrịgo Passo Campolongo dị na mpụga Arabba ma nwee cappuccino mara mma. - Ee, n'ezie.- Ugbu a, emegoro m ụzọ njem 35-kilometa.
Ọ bụghị ogologo. Ma ọ na-ewere nrịgo Pordoian na Fedaia, nke na-ejedebe na ọdọ mmiri mara mma.- Nke ahụ ziri ezi.
Ugbu a, m na-akwọ ụgbọala ihe na-erughị na Hal fte nke ụzọ. Ma m na-aga ogologo ugwu a. Ikekwe ọ bụghị.
O yiri ka ọ bụ ihe na-adịghị mma n'ebe ahụ. Mana n'ezie enwere m eriri mgbada n'akụkụ nke ọzọ. Agaghị enwe ike tụọ ihe isi ike na kilomita. - Ikekwe oge. - Eeh. - Ya mere, ọ bụ ihe gbasara ike na obi, nke anyị ga-atụ na mita ike ike anyị 2max yana Wahoo TICKR anyị.
Kedu ihe siri ike? Ọpụpụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ bụ ma ọ bụ korota? Ma mgbe m nọ na ya, Si, ị nọ n’elu igwe kwụ otu ebe na-eyiri Lycra. Kedu ihe bụ nke ahụ? - Ọ kwere. Ana m enweta ikike pụrụ iche. - O doro gị anya? - Eeh. (Cracking brek) (rock rock) - Bịanụ, Si, dobe ya! (Rock music) - Ugbu a ị nwere ike ịnọ na-eche ihe ihe a niile nwere na GCN, ma e wezụga ikike ị ga-egwu.
Nke bụ́ eziokwu bụ na ụzọ na ụzọ dị iche iche si abịaru ibe ha nso. N'eziokwu, imirikiti ihe ndị ụmụ GMBN na-eme dị tere larịị dịka ha nwere ike inweta. Ma echefula na ọtụtụ, ọtụtụ ọgbara ọhụrụ ịgba ịnyịnya ígwè na diski brek na nnwere onwe nke ịgagharị maka taya buru ibu, na-aghọwanye ndị ọzọ.
N'ezie, ọtụtụ ịnyịnya ígwè na-eji naanị igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ ọtọ na-enye ugwu, agbanyeghị iji nye ikike ime njem kwesịrị ekwesị. Anyị chere na ị ga-achọ ịmata etu esi eme ya? ịnya ụgbọ ala siri ike. N'eziokwu, anyị na-anwale nke ahụ na igwe kwụ otu ebe 29er.
Dị ka anyị mụtara n'oge na-adịbeghị anya banyere okporo ámá cobblestone Paris-Roubaix, ọ naghị eme nnukwu ihe. Kedu ihe m nwere ike ikwu, ọ dị m ka anyị ji nwayọ na-enwe ọganihu ebe a. M ka mma ịhụ ebe Matt nọ. (funky techno music) - Ọfọn, na-akpa ọchị banyere ikwu nke bụ ike o doro anya na-adabere otú ike ị na-agbalị, ihe bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ebe a ụzọ igwe kwụ otu ebe? ihe mara mma bụ n'ihi na ị nwere ike ịga ije dị mfe ma ọ bụ sie ike dịka ịchọrọ. (Pant) Ma echegbula.
Amaara m na nsọpụrụ ndị na-agba ụzọ nọ n'ihe ize ndụ, n'ihi ya, m ga-arụsi ọrụ ike. (Pants) (egwu egwu teknụzụ) - Oh ụbọchị m, nke a bụ ịrị elu siri ike. Mara mma dị nnọọ guzo n’elu igwe kwụ otu ebe, ọ na-amanye m na njedebe.
Can nwere ike ịhụ na ELEMNT gosipụtara m na m ga-agbago ebe ahụ, nke na-adịwanye ike karịa. N'ikwu eziokwu, ị ga-ahụ na ọ ga-esiri gị ike. (Pants) A na-ejikọ ọkụ ndị a n'akụkụ na mpaghara ike m.
Green bụ fọrọ. Ma n'ọhịa, m ga-arịgoro mgbe mgbe ma hụ odo na ọbụna ọbara ọbara. Nke ahụ bụ n'ezie uhie na oke osimiri.
Ọ bụghị n'oké osimiri. Anyị nọ na mita 2,409. (Ogologo) Ah. (Exhales) Mmeri. 100 mita site na nzuko.
Ndi nzuzu snow cannons. - Ọfọn, m fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na njedebe nke nrịgo na ịrịgo, enwere m ike ịgwa gị na ikuku mara mma nke ukwuu ebe a maka onye dị ka m nke anaghị eji ogo. Ọ bụrụ naanị na m lere anya na mita 2,058 gara aga nke elu, m ka nwere ihe dị ka mita 160 gaa na elu ugwu nke Pordoi.
Ọ fọrọ nke nta ka m nọrọ ebe ahụ. (funky techno music) (na-eku ume nke ukwuu) Ọ dị mma, na nrịgo nke abụọ na nke ikpeazụ nke ụbọchị ahụ, Passo Fedaia. Ugbu a, m na-agba ịnyịnya a otu ya mere m n'aka na ihe na-atụ anya.
Mana ihe m maara bụ na ọ bụ ihe dịka 7 kilomita na ọkara n'ogologo, nkezi 7%, nke siri ike maka onye ọ bụla. Aga m edebe ya na acha anụnụ anụnụ, mgbalị mara mma ma na-agbanwe agbanwe, gbalịa ịnụ ụtọ ya dịka o kwere mee. (ume) Ọ ga-ama mma - (ogologo ọkpa) Ah.
Hapụ ekweghị ekwe n'akụkụ maka otu nkeji. (Pants) Nke ahụ ekweghị ekwe. Anyị enwere ike ịhụ ebe anyị na-aga? Oh ee, ee ee! Ebe ahụ ka anyị na-aga. (Mmeri egwu) (Wheels crunch) - N’ikpeazụ n’elu Passo Fedaia.
Oge maka kọfị. (mmụọ) - Ugbu a ana m ekweta na na mbido ụbọchị m chere na, ebe ọ bụ na anyị ga-erughị ọkara anya, enwere m ike ịbụ onye izizi ga-agbacha ọsọ ahụ. Otú ọ dị, n'akụkụ dị mma, nke ahụ pụtara na ọ nwere ohere n'ezie.
eme ka ọsụsọ na-agba calorie
Agbanyeghị, nsogbu ga - enwe ugbu a na nnwale anyị niile n'ihi na n'ime mita ole na ole m nwere ike ọ gaghị agagharị ọzọ ruo mgbe m rutere n'ọgwụgwụ. Ya mere, anyị agaghị enweta data arụmọrụ ọ bụla. Mana m ga-arụsi ọrụ ike, n'ihi na agbanyeghị na enweghị m ọtụtụ akwara, ihe m nwere ga-arapara maka ndụ m ma na-agbadata ala na-asọ oyi.
Amaara m na nke ahụ bụ ọtụtụ ịgba ugwu. Ga-enwerịrị ike ịnwe igwe kwụ ọtọ ebe a. Ma ụkpụrụ na-anọgide n'otu ọbụna na gravel.
Nke ahụ pụtara na ịma jijiji na-eme ka ike gwụ gị, ọ bụ ya mere ịkwọ ụgbọala na-anọghị n'okporo ụzọ nwere ike ịgwụ ike karịa ịkwọga n'ihu. Zọ ụkwụ ahụ siri ike karị, ịrụsi ọrụ ike karị. (Pyschedelic music) - Si, cappuccino gị dị oyi.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ - - M na-atụ anya na ị ga-enweta m otu. Daalụ, di ma ọ bụ nwunye - Lee, ị dị ntakịrị nká, obere ike gwụrụ. - Ee, nke ahụ siri ike. - Ọ dị mma, ka anyị ruo n’isi. - Ee. - Ka anyị lee data ị nwere.- Ọ dị mma.- Enwere m mmasị n'ihe ị nwere n'ebe ahụ.- Ọ dị mma, ya mere, anọ m n'okporo ụzọ obere ihe karịrị awa abụọ.
Ogologo ike m bụ naanị 152 watts, nke na-abụchaghị ihe ọ bụla maka m na akwụkwọ. Arụrụ m ọrụ ike karịa ma ọ bụrụ na m na-eme ihe n'eziokwu. Dị ka ị na-ekwu, ọ dị ka ike gwụrụ m.
Mana ekwesịrị m ikwu, enwere m nnukwu ihu na ihu m. Nke ahụ tọrọ ụtọ. - Ọ dị gị ka ikpori ndụ.
Ọnụ ọgụgụ m yiri nke gị. Performancerụ ọrụ ahụ dị obere. Ma ọ bụrụ na ị gwuru ntakịrị ntakịrị, enwere m mgbochi abụọ na-arịgo.
O doro anya na ha abụọ na-arịgo ebe ahụ. M tinyere mpaghara anọ na ise maka ihe dị ka minit 30. O doro anya na m nwere ihe na-esi ísì ụtọ - nke na-adọrọ mmasị mgbe ị lere grafụ ndị a nke data arụmọrụ gị na ịrịgo, ọ bụ ezigbo ọmarịcha mgbalị, ọ bụghị ya? Mgbe ị na-eji ya atụnyere ihe m kwesịrị ime, ị na-eme ọtụtụ mbọ a na-agba mbọ nke ọma.
Yabụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na arụmọrụ m adịchaghị ukwuu, m ga-arụsi ọrụ ike iji mee ka ike m dị n'okporo ụzọ gravel ma sie ike ịsị na m na-arụsi ọrụ ike site na snowdrifts ole na ole, anaghị m chee na onye a bụ Kraft na-akọ akụkọ a dum. Ọ bụ ahụ m nke dị n’elu ma eleghị anya ọ ga-akacha ewute m. A ghaghị itinye uche nke ọma maka ọtụtụ mkpọtụ. - Ee, mana na njedebe, Si, kedu ihe siri ike? A ga-ebugharị ya n'okporo ụzọ maka kilomita.
Have nwere nkwụsi ike a na - agagharị, n'ihi ya ị gaghị enweta ngwa ngwa ma ọ bụ nke ahụ. Mana n'ihe gbasara ịgbalị oge elekere, m na-alaghachi n'okwu mbụ m. Echere m na o siri ike otu ị chọrọ ka ọ si sie ike. - Echere m na ị nwere ike ịbụ eziokwu.
Echere m na o siri ike dịka ịchọrọ, mana m na-ekwu na ịpụ n'okporo ụzọ na-arụ ahụ gị n'ụzọ dị iche - Ọ ga-amasị m ikwenye na nke ahụ - echere m na enwere m ike ịga mgbatị ahụ, Matt. - Ọfọn, anyị kwuru okwu, mana gịnị ka ị chere? Kedu ihe siri ike karị? Okporo ụzọ ma ọ bụ okporo ụzọ? - Ee, sonye na ihe ndị a n’okpuru. Tupu ị rapaara n'ezie, jide n'aka na ị nwere ndenye aha na GCN, ọ dị oke ọsọ, pịa ụwa naanị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ọdịnaya lee otu Matt si jisie ike nweta ụmụ okorobịa GMBN n'ime ọnwa isii nke ọrụ aka gị na-egosi gị otu ịgbago igwe kwụ otu ebe naanị ebe ahụ - ịgaghị agwa ha ihe niile ahụ. - Nke ahụ bụ ahụmịhe, ọ bụghị ya? - kwọ ụgbọala n'okporo ụzọ, n'okporo ụzọ. - Ehee.
Echefukwala mmasị na ịkekọrịta.
Kedu ka m ga-esi tinye ụzọ ụkwụ na ọrụ igwe kwụ otu ebe m?
Ijitinyeọdịnaya dịkaụzọ ụkwụ, agafe ma ọ bụ foto, ị ga-achọkeeakaụntụ ma ọ bụ banye. Ozugbo ịbanye, pịa akara ngosi akaụntụ gị n'akụkụ aka nri aka nri nke ibe ahụ wee si na wedaa họrọ 'Ekekọrịta GịIlszọ ụkwụ. ” Site na windo popup ị nwere ike ịhọrọkeeịnyịnya ma ọ bụnzọ ụkwụma ọ bụ ịkekọrịta foto, mkpuru, akara ma ọ bụ vidiyo.
Lelee gị. You're na-na na mediocre ahịhịa akpa araparawo a nwụrụ anwụ ọgwụgwụ na-enweghị ihe ọ bụla na ndụ na-eme ka ị nwee obi ụtọ. Ọbụna nnụnụ ahụ chere na ị bụ onye emeriri. (Nnụnụ na-ada ụda) Oge eruola maka mgbanwe.
Gaa n'èzí. You na-ahụ ụmụaka a? Ha na-enwe oge kachasị mma nke ndụ ha na igwe kwụ otu ebe. Ha ma ihe na-aga.
Gaghị ekpori ndụ dịka ụmụaka a. Ọ gwụla ma ị zụtara igwe kwụ otu ebe. Gaa na ụlọ ahịa na-ege ntị ka ụfọdụ nwoke na-amaghị ihe ọ na-ekwu.
Gbalịa ire onwe gị igwe kwụ otu ebe. Buru igwe kwụ otu ebe ma zụta ya. Jikere ma kụọ ụzọ ụkwụ dị na mpaghara gị.
Ọ bụ oge na-agba ịnyịnya ọhụrụ gị igwe kwụ otu ebe. (Bike pound) (Moans) Ghọta na ọ bụghị igwe kwụ otu ebe na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe ka emepụtara. Nwaa ọzọ.
Oge a ị na-eme nyocha gị. Gaa na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe ma gwa ndị ọrụ ahụ okwu. Know maara igwe anyịnya igwe.
Zụta igwe kwụ otu ebe, buru njem dị iche. N’oge a igwe kwụ otu ebe gị agaghị agbada n’ọkara. Mee ahụike na ịrịgo na ntụkwasị obi na ọdịda.
Gbaa ịnyịnya ihe i nwere ike na-adịghị mesie ihe ị na-apụghị. Ọ na-akawanye mfe. Ga-enwe mmetụta ka mma, mba Ruo mgbe ị matara na onweghị onye ọzọ na-agba ịnyịnya na uwe elu na uwe khaki.
Oge iji ejiji. Onwem dị ka nke a. Jiri obere okwu dịka Shred na Gnar (bass-heavy hip-hop music).
Gaba, ka a gafere gị n’elu ugwu na ugwu. Ọchịchọ nke ka mma ga-eto n’ime gị. Ichegbu onwe gị banyere igwe kwụ otu ebe.
Dozie na ụdịdị, akụkụ isi, na ihe dị egwu dị ka ike ọgwụgwụ ike. Mgbe ahụ ghọta na ịchọrọ ọrụ nke abụọ iji kwado ihe riri gị ahụ. (wepu akpịrị ya) Echere m, agụụ? Zụta igwe kwụ otu ebe maka oge nke atọ.
Nke a nwere ihe ndị ọzọ, ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ na oche oche na-arịgo na ala. - Mara mma. - Ọ bụghịzi naanị ịkwọ ụgbọala mgbọrọgwụ, izipu tụlee na ịmụ aghụghọ.
Mma. Ọ karịrị naanị ihe omume ntụrụndụ ugbu a. Ọ bụ Ndụ.
Otu ụbọchị, ịgwa ndị ọrụ ibe gị ihe gbasara draịva ị merela na otu ị siri agba. Ha anaghị ege ntị. Otu bụ.
Aha ya bụ Jess na ọ na-anya ụgbọ kwa. Ọ na-ajụ, sị, 'Donu chọrọ ịnya ụgbọ elu oge ụfọdụ? 'Ma ị na-asị' Na na na! 'Ọ bịara bụrụ na Jess dị mma. Dị ka, rea lly mma.
Ọ na-azụ gị n'okporo ụzọ gbagoro na n'ụzọ niile. Nweghị ike ịgbadata, ihe ọ na-agba. Make na-eme ya mana ike gwụrụ gị.
Ọ na-echere 30 nkeji mana ọ na-ekwu na ọ bụ nnukwu ọchị Ọ na-ekwu na ị kwesịrị ime ya ọzọ oge ụfọdụ. I kwenyere, ọbụnadị na ọ gụpịawo gị. Mana nke ahụ anaghị enye gị nsogbu rue elekere ụbọchị. (Wine) (bass arọ hip hop music) mgbe ọrụ ụbọchị.
Chọta otu dị iche iche ma soro ndị ọkwọ ụgbọ ala ga-enyere gị aka ịmezi egwuregwu gị. Bụrụ onye ọkwọ ụgbọala ka mma site na ịnwale ịdebe. (Bass heavy, hip music) Rịba ama anyịnya igwe ndị ọzọ, dị ka igwe kwụ otu ebe a, na igwe kwụ otu ebe.
Cycgba ígwè n'okporo ụzọ pụrụ ịbụ ihe ọchị. Nọdụ ala na a unyi jumper na-ahụ a ole na ole jumps na-eme gị aghụghọ. Ihe a siri ike karịa ka ị siri chee.
Ọ dị elu n'ezie, nke ahụ jọgburu onwe ya. Mba Gbaa ịnyịnya ọzọ, rịgoro n'elu, wụkwuo elu, ma gaa ọsọ ọsọ karịa ka ị chetụrụla.
Na-elekọta gị igwe kwụ otu ebe na mma ya. Zụta akụrụngwa, zụta akụkụ, zụta ọtụtụ ngwaọrụ iji wụnye akụkụ ahụ. Wepụta oge iji kpebie igwe kwụ otu ebe ọzọ.
Chọpụta nrọ gị na carbon. Ihe riri gị ahụ ga-aka njọ. Ga-eji obere oge rụọ ọrụ na oge ị ga-elele igwe kwụ otu ebe.
Gbaa ịnyịnya ọzọ, gbutuo ahịhịa. More ụzọ ụkwụ, ọzọ Lawn. Ilszọ ụkwụ, Lawn.
Buyzụta nrọ gị. Weta ụfọdụ ndị enyi ma gbagoro n'ihu na karịa karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Kwe ka igwe kwụ otu ebe gị gaa ebe ndị amachaghị adị.
ngwa ngwa dumbbell
Gaa na ụbọchị ọzọ. Oge a ị bụ n'ezie ị ga - anọgidesi ike. Enweghị mgbaghara, enweghị mgbaghara.
Nke a ka mma. Oge a ọ ga - eti gị naanị na nkeji ise, ị ga - enwe obi abụọ, elu ise, o nweghị ike ikwenye ole ị nwetara. Ndewo ndewo, otu ụbọchị ị hụrụ nkwupụta akụkọ banyere igwe ọhụrụ ọhụụ, ọ dị ka nke gị mana 15% dị ọkụ, 35% siri ike na uhie.
Ọ na-efu nnukwu turf karịa igwe kwụ otu ebe ị zụtara. Were igwe kwụ otu ebe ka ị gafee ya. Ghọta otu ị si mee nke ọma na ịnwe ịkwọ ụgbọala na-atọ ụtọ etinyela ndụ gị.
Ọ bụghị maka igwe kwụ otu ebe ị na-agba, ọ bụ maka mana ịnyịnya igwe gị na-eburu gị. (Ikuku hisses) Ọfọn, ma eleghị anya ọ bụghị nke a. ('Agara m ihe ọ Juụ Juụ ahụ' site na Dream Junkies) Na mpaghara m, ha hụrụ ya n'anya ♪♪ M ga-agbaji ya ♪♪ Dị ka ịgbanye injin na ♪♪ Ascension ♪♪ Akụkụ ọ bụla na-elebara m anya ♪♪ Lee mkpụrụ obi m ♪ Lee obi m anya ♪♪ Lee olile anya m ♪♪ Nwee ụwa n'azụ m ♪♪ Ma m ka bu ya ♪♪ Gwa ha na Chineke nwere aka m ♪♪ Agaghị m ahapụ ya ♪♪ III bịara site n'akụkụ nke oké osimiri ♪♪ Swam 'em nke kachasị mma ♪♪ enweghị m ike ịgọnahụ na ahọpụtara m ♪♪ Ee, ọ bụ miggity macking Milking igwe okwu ♪♪ Echeghị m na m ga-enyeghachi ya ♪
Kedu ihe MTB na-anọchi anya ya?
AcronymMTB na-anọchite igwe kwụ otu ebena-erite naanị site naigwe kwụ otu ebe.Mar 12 2020
Ogologo oge ole ka ụzọ ụkwụ San Gabriel River?
Ọ bụ pavednzọ ụkwụmakaigwe kwụ otu ebena hiking. Na ngụkọtaogologo38 Miles. Tonwetanzọ ụkwụEnwere ike inweta ọtụtụ ọtụtụ okporo ụzọ East / West na ọtụtụ ogige dị n'akụkụ okporo ụzọ 605. Etiti nkenzọ ụkwụdị na Dunlap Crossing, n'etiti Washington na Whittier Blvd na Whittier.
Bikgba ugwu n’elu ugwu ọ na - agba ume karịa karịa ịgagharị?
N'ozuzu,igwe kwụ otu ebeachọpụtalaọkụgịcalorie ndị ọzọ. Ná nkezi,kaNwoke 180 poundigwe kwụ otu ebena 5.5 kilomita / awaga-agba okugburugburu 320kalori. N'aka nke ọzọ, otu onyenwere ike ireIhe dịka 305kalorimgbe olena-eje ijena 3.5 kilomita / awa.
Runninggba ọsọ ka mma karịa ịgba ugwu?
Ugwu UgwuAmaokwuNa-agba ọsọn'ihi na arọ Loss:
Iwetulata ibu abụghị ihe ngwangwa. Nke a pụtara nana-agba ọsọn'ozuzu na-erekwu caloriekarịa ịgba ịnyịnya. Ihe kpatara na ọ na-agbakarịkwu calorie karịa, ọ bụ n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ibuli obi ha elu karịana-agba ọsọ karịana-agba ịnyịnya.
Kedu ka m ga - esi budata GPX site na ọrụ igwe kwụ otu ebe?
PịaBudata GPXnjikọ ma ọ bụBudata GPXIgodo faịlụ nabudatakaGPXfaịlụ nke nzọ ụkwụ ma ọ bụ ụzọ akwadoro. Ozugbo ịebudatarafaịlụ, ị nwere ike mgbe ahụbulitema ọ bụ chekwaa egwu ahụ na ngwaọrụ ejiri GPS (Garmin, ekwentị, wdg) maka ịgagharị n'okporo ụzọ.
Ndi MTB Project enweghi ego?
Iji mee ka ọ dịkwuo mfe iwere ozi a niile gị na ụzọ ụkwụ, ebe nrụọrụ weebụ na-agagharị ugbu a na enwere mmekọrịtaIhe MTBngwa (n'efu) dị makaGam akporona Google Play na maka iPhone / iPad na iTunes App Store.19 nke 2013 g.
Ebee ịchọta ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe kachasị mma?
Chọpụta ụzọ kachasị mma ugwu igwe kwụ otu ebe ịnagide gị nso. Ma ị na-achọ ịgba ịnyịnya naanị ụzọ ụgbọ ịnyịnya kachasị mma ma ọ bụ na ị bụ onye ọhụrụ na-agba ịnyịnya ugwu ma chọọ ịnya dabara maka ndị mbido, MoreDirt ekpuchila gị.
Kedu kilomita ole dị na nzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe?
Enweghị ihe mgbochi. Ewepụghị. Ọkachasị Ewepụghị na ọbụlagodi. Uneven teren. Obere ugwu. Mpempe akwụkwọ dị elu, nkume, mgbọrọgwụ. Tricky teren. Nke nkpoda. Ọ bụghị maka ndị mbido. Ize Ndụ. Nnọọ nkpoda. Ndị ọkachamara naanị. 155,919 kilomita na ụzọ 47,639, gbakwunyere site na ndị na-agba dịka gị.
Kedu ihe ị kwesịrị ịma banyere ịgba ịnyịnya ugwu?
Iji nwee ọ enjoyụ na ịnụ ụtọ igwe kwụ otu ebe, ma ị na-agba ụzọ ụkwụ ugwu dị mfe ma ọ bụ ihe siri ike karị, naanị ihe dị ezigbo mkpa bụ na ụzọ gị dị. Chọrọ ihe dị ezigbo mkpa — ma dịrị njikere inwere obere unyi.